Nilaza ny fampitam-baovao any Makedonia Avaratra fa naka tahaka ny hiran’ilay kintana Balkan malaza Toše Proeski ny tarika Rosiana iray · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Septambra 2019 14:37 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, Italiano, English
Sary napetaka miaraka amin'ny pikantsary avy amin'ny lahatsarin-kira “Bože čuvaj ja od zlo” mampiseho an'i Toše Proeski sy “Bože” mampiseho an'ny Zemlyane. Azo ampiasaina.
Andian-dahatsoratra an-tserasera maromaro tany Makedonia Avaratra no nanameloka ilay tarika rock Rosiana Zemlyane noho ny fakany tahaka ny hira malaza an'ilay kintan'ny pop Makedoniana Toše Proeski tamin'ny taona 2007 .
Nanomboka tamin'ny zoma 19 Jolay 2019, marobe ny sehatra fampitam-baovao Makedoniana no namoaka ny dikany isankarazany tamin'ity hira ity mba hanaporofoana ny heviny, niaraka tamin'ny lohateny lehibe toy ny hoe “Naka tahaka ny hiran'i Toše ny tarika Rosiana, ankalazainy toy ny hoe azy ilay hira,” na ny hoe “Lasa lasibatry ny mpaka tahaka i Toše” : nisy tarika Rosiana nangalatra ny hirany. ”
Raha nametraka ny teny hoe ‘nangalatra’ tao anaty farango sosona ny fampahalalam-baovao sasan , ny hafa kosa nampiasa ny teny toy ny hoe ‘nindrana’. Naneho hatezerana ny lahatsoratra am-polony, anisan'izany ny gazety Nova Makedonija izay nampiaka-peo hoe “Fahamenarana ho anareo noho ny fangalarana sy ny fanimbana ny hiran'i Toše.”
Antsoina hoe “Bože čuvaj ja od zlo” ​​(“Andriamanitra ô, arovy amin'ny ratsy izy “) ity hira malaza an'ilay mpihira Makedoniana Toše Proeski (1980-2007) ity izay maty tamin'ny lozam-piarakodia taorian'ny fotoana nivoahan'ny hira. Vao maika nanampy trotraka ny fihetseham-pon'ireo mpankafy ny firesahana momba ny fahafatesana sy ny fahalasanana tao amin'ny tononkira.
Nandona ny fon'ny faritra Balkan ny fahafatesan'i Proeski teo amin'ny faha-26 taonany noho izy iray amin'ireo kintan'ny mozika vitsy nanjary olo-malaza noho ny kalitaon'ny fahombiazany, ary koa noho ny fomba nampitany izany. Tsy toy ny ankamaroan'ny kintan'ny mpanakanto avy any Balkans anefa izy fa nihira tamin'ny fiteny samihafa tao an-toerana, namoaka ny rakikirany tany amin'ny firenena maro, ary niara-niasa tamin'ny mpiangaly mozika avy any Gresy, Serbia, Kroasia, Slovenia, Bosnia sy Herzegovina, Italia, ary ny Fanjakana Britanika. Avy amin'ny fianakaviana tso-po, nampiasa ny lazany izy hanohanana ny olana ara-tsosialy ary Namita Iraka Nasionaly ho an'ny Ankizy tao amin'ny UNICEF izy nanomboka tamin'ny taona 2004.
Ny tranonkala VBU Muzichki registar (“Fandraketana Mozika VBU”) izay toy ny angondrakitra azo antoka ho an'ny daholobe amin'ny famokarana mozika Makedoniana (miaraka amin'ny fampiasa azy amin'ny mitovy amin'ny IMDB) dia namoaka ny lisitry ny hira maherin'ny 20.000 avy amin'ireo mpihira maherin'ny 3 500, ary nitanisa ny angondrakitra ho an'ireo mpandray anjara.rehetra ho amin'ny famokarana ny rakikira «Lalao ivelan'ny sisintany» izay nahitana ilay hira. Araka izany, Miro Buljan ilay mpamoron-kira Kroaty fanta-daza no mpanoratra ny feony, raha i Antonija Šola kosa no mpanoratra ny tononkira kosa izay mpilalao sarimihetsika malaza Kroaty sady mpihira no mpanoratra tononkira fantatra manerana ny faritra. Navoaka tamin'ny dikan-teny roa, amin'ny fiteny Makedoniana sy amin'ny teny Kroaty ilay rakikira sy ilay hira.
Nampitaha ireo hira
Antsoina hoe “Bože” (“Andriamanitra!”) ity hira nohirain'ny Zemlyane ity izay nivoaka tamin'ny 26 Febroary 2019. Nilaza ny fanoritsoritana tao amin'ny lahatsary Youtube fa nosoratan'i Vladimir Kiselev ny tonony ary i Vladimir Trushin no mpanoratra ny feony.
Niforona tamin'ny taona 1978 ilay tarika Rosiana izay adika hoe “Zanak'olombelona” raha amin'ny teny anglisy ny anarany. Efa naharitra no nihirany, ary nahazo laza be ihany koa izy indrindra tamin'ny fiandohan'ny taompolo 1980 tamin'ny andiany ” VIA” (feon-kira sy zavamaneno) ). Nampidiriny tamin'ny indostrian'ny mozika sovietika tamin'izany fotoana izany ny rock Tandrefana.
Tamin'ny taona 2014 dia nisy mpankafy iray namoaka lahatsary nahitana ny rakipeo amin'ny dikanteny Kroaty tamin'ilay hira hoe “Andriamanitra ô, arovy amin'ny ratsy izy” niaraka tamin'ny dikanteny Rosiana ho fanomezam-boninahitra an'i Toše Proeski. Nanoratra izy:
Мой перевод. Потрясающий певец! Наслаждаемся прекрасной мелодией, текстом, смыслом и голосом!
Ny fandikanteny nataoko. Mpihira mahafinaritra! Ankafizo ny feon-kira mahafinaritra, ny tononkira, ny dikany ary ny feony!
Nanolotra fandikantenin'ity hira manokana ity amin'ny fiteny miisa 15 samihafa avy amin'ny teny Arabo mankany amin'ny teny Okrainiana tamin'ny alàlan'ny sehatra LyricsTranslate ireo mpankafy hafa .
Miharihary fa samy mitovy ilay feony sy ny tononkiranin'ireo hira «ôrizinaly» sy ilay hira Rosiana na dia mbola tsy nisy aza avy amin'ny fampahalalam-baovao na manam-pahaizana momba ny mozika na ny fitsarana nanambara ny fakana tahaka. Ohatra, mivaky toy izao ny fiverenany amin'ny teny Makedoniana :
Боже, не ми треба ништо друго
Дур’ сум жив под ова небо
Топла постела и очи што ги знам
Боже, ангели од небо прати
Таа нема да се врати
Чувај ја од зло, таа нема никој свој…
Andriamanitra ô tsy mila zavatra hafa aho
Raha mbola miaina eto ambany lanitra
Ny fandriana mafana ary ny maso fantatro
Andriamanitra ô, mba andefaso ny anjelinao any an-danitra aho
Tsy hiverina izy
Arovy amin'ny ratsy fotsiny izy,
Tsy manana na iza na iza izy eto amin'ity tontolo ity.
Raha ny fiverenana tamin'ilay hira vaovao nataon'i Zemlyane kosa mivaky hoe:
Боже мне так мало надо света
Лишь спросить ответ от неба
Ей сказать прости, держи, но отпусти.
Боже как же надо мне немного
Знать светла её дорога
Не оставь в пути, помоги и защити,
Не оставь её – помоги в пути
Защити её в пути.
Andriamanitra ô, hazavana kely ihany no ilaiko
Mangataka ny valiny avy any an-danitra aho
Mamelà azy, tano izy, saingy avelao handeha.
Andriamanitra ô, nahoana no kely ihany no ilaiko
Fantatrao ny jiron'ny làlany,
Aza avelanao handeha irery eny an-dalana izy,
ampio izy ary arovy …
Ao anatin'ny indostrian'ny mozika, matetika no tanterahina miaraka amin'ny fanomezan-dàlana avy amin'ireo mpanoratra tany am-boalohany ny fampiasàna indray ny feonkira miampita ny sisintany sy ny fampiasana hira ho an'ny tanjona ara-barotra na dia tsy zava-baovao any amin'ny faritra Afovoany sy Atsinanan'i Eorôpa aza izany. Ohatra, raha namerina nihira ny hiran'ilay tarika Yogoslavy/Serba Bajaga i instruktori ny tarika Rosiana The Peace Dukes dia nambarany mazava izany tao amin'ny fanoritsoritany ny lahatsariny. Matetika ahitana ny zo ara-pitaovana (piraty), fa tsy ny zo ara-maoraly (fanovana ny hiran'ny olon-kafa mba ho an'ny tena manokana) ny raharaha mikasika ny fanitsakitsahana ny zon'ny mpamorona ao amin'ny faritra izay fantatry ny daholobe.